Diyaaradda Korea waxay u aragtaa haweeney 'inay aad u jilicsan tahay' inay duusho, wayna jeedsataa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Diyaaradda Korea waxay u aragtaa haweeney 'inay aad u jilicsan tahay' inay duusho, wayna jeedsataa
Waxaa laga yaabaa 11, 2011
Waxay ahayd inay u duusho Koonfurta Kuuriya iyada iyo gabadheeda oo loogu talo galay maalinta hooyo ee gaarka ah.
Laakiin sidoo kale waxay ahayd rabitaankeedii ugu dambeeyay ee Crystal Kim inuu 'ku dhinto guriga' ka dib markii laga helay kansarka naasaha marxaladda afaraad bishii Febraayo.
Taa bedelkeeda Ms Kim waxay is aragtay huteel dhamaadka usbuuca ka dib markii ay ka leexisay shirkadda diyaaradaha ee Korea iyada oo u muuqata 'aad u jilicsan' duulimaadkeeda.
Hooyada dhimatay ayaa ogolaansho ka heshay labo dhakhtar iyo warqad cadeynaysa inay ka duusho magaalada Seattle dhamaadka usbuuca, laakiin diyaaradu wali waxay u maleyneysaa in Ms Kim laga yaabo inaysan soo kicin duulimaadka dheer, Penny Pfaelzer, oo ka tirsan shirkada diyaaradaha ee Korea.
Waxay sidoo kale sheegtay in rakaabka kale ay 'argagaxsan yihiin' hadii rakaab kale dhinto isagoo duul ku jira waxayna ku tilmaamtay xaalada nasiib daro.
'Waxa ugu horeeya ee ka soo baxa afkiisa tigidhada ayaa ahayd, "Ma fiicantahay in la duulo? Waxaan u baahanahay warqad dhakhtar, ”ayay raacisay.
Shirkadda ayaa Kims-ka dhigtay hudheel si ay ugu suurtagasho inay dib ugu noqdaan dhakhtarkooda Isniinta si ay u helaan warqad kale.
Laakiin Diyaaradda Korean Airlines ayaa lagu soo waramayaa in wali aysan ku qanacsaneyn oo diyaaradda ay ka tagtay iyadoo labada lamaane aysan jirin.
Shirkadaha looyaqaan Delta Air Lines ayaa lagu soo waramayaa inay sheegeen inay berri u duuli doonaan Kims South Korea
Mr Kim ayaa laga helay cudurka kansarka naasaha heerkiisa afraad bishii Febraayo.
Waxay rajeyneysay in isku darka daawada bariga iyo daaweynta guud ay siin karto waqti dheeri ah.
Waxay sidoo kale qorshaysay inay aragto wadanka ay ku dhalatay oo ay kula soo xiriirto qaraabadeeda.